7 Mejọọ Ọrụ na-adịghị Mkpa Youkwesịrị izere | Lọ ahịa SARMs
Mgbe anyị na-eri ezigbo nri ma na-emega ahụ oge niile, oge ụfọdụ ọ na-esiri anyị ike ịghọta ihe kpatara na anyị anaghị ahụ oganihu. Eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ anyị na-emebi ọganiihu anyị site na ịghara ịgbaso ụfọdụ usoro usoro mmega ahụ. Ihe ị na-eme mgbatị ahụ dị oke mkpa dị ka ịrụ ọrụ n'onwe ya.
Eziokwu zuru ụwa ọnụ bụ na anyị niile chọrọ ị nweta ọtụtụ ihe na mgbatị anyị. Ma ebumnuche gị bụ ịhapụ ibu ma ọ bụ nweta ahụ ike, anyị maara na ịchọrọ ịmezu ebumnuche gị ngwa ngwa o kwere mee, yabụ anyị chịkọtara ndepụta nke mmejọ mmega ahụ ị kwesịrị izere.
Gịnị mere o ji dị mkpa izere mmega ahụ mmega ahụ?
Imehie ihe so n’ihe mmadụ bu pụta ụwa. Onweghi onye zuru oke. Ma enwere ọtụtụ ihe kpatara ndị mmadụ ji eme ọtụtụ mmega ahụ mmega ahụ a. Nke mbụ, ndị na-amalite amalite amaghị otú ha ga-esi zere ha. Ha na-eme ihe omume ha na-ezighi ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi. O yikarịrị ka ha amaghị ka esi elekọta ahụ ha mgbe ha mechara mgbatị ahụ. Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta otu esi egbochi ma gwọọ mmerụ ahụ nke ọma. Ma, ọbụna karị, ndị nwere ahụmahụ na-emehie ihe mgbe ụfọdụ. N'ịchọ inwe ọganihu ọsọsọ, ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ karịa ahụ ha. Ihe niile nwere ike ime ha ọtụtụ oge.
7 post-mgbatị mgbatị i kwesịrị izere
1. Ime ka mmiri drinksụọ mmiri gbara gị ume
Ọ bụrụ na a kwenyere ịre ahịa ahịa, anyị kwesịrị ị drinkingụ ihe ọ sportsụ drinksụ egwuregwu tupu, n'oge, na mgbe emechara ahụ, mana ndị a na-ejupụta na shuga na-adịkarị mma. Onye na-eme mgbatị ahụ anaghị achọ ha. N'ezie, hydrating mgbe mgbatị ahụ dị oke mkpa iji zere ike ọgwụgwụ. Kama ịhydụbiga mmanya ọ'ụ'ụ egwuregwu, drinkụọ mmiri. You nwere ike gbakọọ ole lita mmiri ị chọrọ ị drinkụ ihe karịrị otu ụbọchị site na ịbawanye ibu gị na kilogram site na 0.03.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị dị 60kg, ị kwesịrị ị na-a aroundụ ihe dị ka lita abụọ kwa ụbọchị.
2. naghị arahụ ụra nke ọma
Ọ dị mkpa ịrahụ ụra n'elekere 10 nke abalị, ebe nke a bụ mgbe ahụ gị na-elekwasị anya na ndozi ahụ. Ikwesiri ịchọta ụra opekata mpe awa asatọ n'abalị ọ bụla, ebe ọ bụ na ahụ gị na-elekwasị anya na mgbatị mmụọ sitere na elekere abụọ nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị, ọ gaghị ekwe omume inwe mgbatị ahụ dị ịtụnanya. Ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị, ọ dị mfe iri ụdị nri na-ezighi ezi. Ya mere, lakpuo ụra n’oge.
3. Anaghị eri protein zuru ezu
Mgbe ị na-arụ ọrụ, ị na-emebi akwara gị, nke mere na ọ dị oke mkpa iji rie protein karịa mgbe ị wughachiri ha. Nnyocha egosiwo na iri protein nwere ike inye aka mee ka akwara na ume - ọ na - eme ka ị nwee afọ ojuju.
4. Chohọrọ obere abụba ma ọ bụ nri nri
A na-ejikarị abụba ndị ọzọ nwere abụba na shuga iji melite uto ahụ, nke pụtara na nri ndị a na-ere dị ka nri ma ọ bụ obere abụba nwere ike ịnwe mmetụta dị njọ na ọnwụ gị. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-agụ aha nri gị ma gwa onye na-edozi ahụ nri ka ọ ghọta nke ọma otu esi enweta nri kwesịrị ekwesị mgbe ị na-arụ ọrụ.
5. akingnara ihe oriri na-edozi ahụ karịa nri
Ọ bụ ezie na, ụfọdụ ndị nwere ọnọdụ ahụike akọwapụtara ga-achọ ịmịnye mgbakwunye ozugbo mgbatị ahụ. Ihe mgbakwunye ndị a abụghị nnọchi maka nri. Ihe mgbakwunye kwesịrị iji nri nri mgbatị kwesịrị ekwesị were ha.
6. Iburu ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ
Onye ọ bụla na-enye ọzụzụ ma ọ bụ ọkachamara ahụike ga-agwa gị na ọnụọgụ na ọnụ ọgụgụ abụghị mgbe niile ezi ngosipụta nke ọnwụ ọnwụ. Mkpụrụ ahụ na-ebu ibu karịa abụba, yabụ kama ichegbu onwe ya maka ọnụọgụ ahụ, ị ​​kwesịrị ịlele ọganihu gị site na iji teepu nyocha ka ị nwee ike ilekwasị anya n'ụdị ahụ gị na-agbanwe kama ị nwere ibu.
7. Overestimating ọtụtụ calorie ị gbara ọkụ
Ọtụtụ mmadụ na-ekwubiga okwu ókè na calorie ha gbara ọkụ na mgbatị ahụ ma weghasị ọrụ siri ike ha tinyeworo site na iri nri na-adịghị mma mgbe emesịrị. O di nwute, imega ahu enweghi ike ime ka ike ghari gi. Nanị ụzọ ị ga-esi felata nwere ike igbochi ya bụ ịnwe oke calorie. A kalori deficit pụtara na ị chọrọ ka a na-ere ọkụ karịa calorie karịa ị na-eri. Nke a dịgasị iche site n’otu onye gaa n’ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-eri nri siri ike, iri oke nri ga - egbochi gị ifelata. Anyị na-atụ aro ka ị gwa onye na-edozi ahụ banyere calorie ole ị ga-eri iji mezuo ebumnuche ọnwụ gị.
Have na-eme nke ọ bụla n'ime njehie mgbatị ndị a na-emekarị 7? Ọfọn, nke a bụ ụfọdụ ozi ọma maka gị: can nwere ike ịtụ anya mgbake dị mma, ọganihu ngwa ngwa, na ọ moreụ si na mgbatị gị ozugbo ịmesịrị usoro mgbatị gị!
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ụlọ na ị na-achọ ịwelite nsonaazụ gị, lee anya na blọọgụ a maka elu 15 ahụ ike ụlọ.